धार्मिक, साँस्कृतिक सद्भावमा खलल नपुगोस् (सम्पादकीय)
धरान बहुधार्मिक, बहुभाषिक मनिसहरुको बसोबास रहेको क्षेत्र हो । यहाँ एक आपसमा धार्मिक तथा साँस्कृतिक सद्भाव कायम रहेको छ । धरानमा बसोवास गर्ने विभिन्न जनजातिहरु आ&ndash;आफनो पर्व, धर्म, संस्कार र संस्कृति आ&ndash;आफनै तरिकाले विगतदेखि म
प्रकाशित मितिः पुष 5, 2075
धरानको गोरु काण्ड र धर्मनिरपेक्षातको कुरा(सम्पादकीय)
यतिबेला धरान चिसो मौसममा पनि निकै तातिरहेको छ । मंसिर २८ गते धरानमा १० जनालाई गोरु काटेको अभियोगमा इलाका प्रहरी कार्यालय धरानले पक्राउ गरे पछि धरानमा यसले माहोल तताएको छ । आदिवासी जनजातिहरुको घना बसोवास रहेको धरानमा गोरु काटे�
धरान नै गोरुको मासुको शहर हुनुलाई केहि बेर लाग्दैन
&lsquo;त्यो बेला त्यो भोजनमा सामेल पासाङ शेर्पालाई मैले सोधेको थिए । &lsquo;गोरुको पुच्छरको सुप कस्तो लाग्यो ?&rsquo; पासाङ शेर्पाले भने &lsquo;भोटेलाई गोरुको सुप कस्तो लाग्यो भनेर नसोध्नु न हौ जसकुमार जी&rsquo; भने पछि म झसंग भए । यसरी गोरुको आईटमको
7922 पटक पढिएको
धरान उपमहानगरपालिकाको र इटहरी उपमहानगरपालिकाे डम्पिङ साईट बन्दै जंगल(सम्पादकीय )
पुर्वकै सुन्दर उपमहानगरपालिका आफुलाई दाबी गरीरहेका इटहरी र धरान उपमहानगरपालिका दुई नगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रमा फोहोर व्यावस्थापनका लागि इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो शिरमा रहेको चारकोशे जंगललाई प्रयोग गरिरहेको छ भने �
साहित्य यात्राको एउटा संस्मरण, महोत्सवको पहिलो अनुभव
तीन जिल्ला छिचोलेर &ldquo;उता होइन यता हेर...&rdquo; करिब छ बर्ष अगाडिदेखिको सिलसिलाको निरन्तरता स्वरुप अहिले भोजपुर जिल्लाको सुदुर उत्तरको साल्पा सिलिचो गाउँपालिकामा एउटा कार्यक्रममा आवद्ध छु । भोजपुर आफैमा भौगोलिक रुपमा बिकट छ, सडकह
खानेपानी साँच्न कुवामा ताल्चा लगाउँछन् गाउँले
धेरैजसो सुख्खा ग्रामिण भेगहरुमा खानेपानीको थोरैधेरै जोहो गर्न आकाशेपानीलाई पोखरी, तलाउ, विभिन्न किसीमका ट्याङ्की, खाल्डो बनाएर सञ्चित गर्ने, एकपल्ट ल्याईएको पानीलाई थोरैथोरै फारो गरेर चलाउने गरेको हामीले सुन्ने गरेका छौँ । �
सुम्निमा साँझः भोलीको सन्ततीको लागि
परदेशमा छुङ र नै देश मोह धेरै नै हुन्छ । हामीलाई देश हुनुको गौरब छ । हामीलाई नेपाली हुनुको गौरब छ । अझ नेपाली राई हुनुको अनुभुति त सजीव छ । हज्जारौ बर्ष लाएर बनेको नेपालका नेपाली अहिले विश्वभर छरिएर रहेका छौ । उहिले गोर्खालीहरुले
उपनिर्वाचन होला त ? तर कहिले ?(सम्पादकीय)
धरान उपमहानगरपालिकामा मेयर तारा सुव्वाको निधन भएका छ महिना पुगेको छ । स्थानिय निकायमा निर्वाचित पदाधिकारीको निधन भएको खण्डमा एउटा समयअवधिमा उपनिर्वाचन गरेर पदपुर्ति गर्नुपर्ने हुन्छ । तर यहा मेयर तारा सुव्वाको निधन पछि चुप�
जोगले हुन्छ भेट, मायाले हुन्छ सम्झना...
म सानै थिएँ, सायद पाँच कक्षामा पढ्दै थिएँ&nbsp;। पहाडबाट सुख, सेवा र सुविधाको खोजीको निम्ति मधेश झरेको समय थियो&nbsp;। त्यो बेलाका अल्लारे दाईहरु मेलापातमा जाँदा अनि हाट बजार जाँदा नै किन नहोस सबैको मुखमा गुञ्जने गथ्र्यो&nbsp;। छेक्यो छे�
प्रकाशित मितिः मंसिर 22, 2075
१६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान र अधिकार(सम्पादकीय)
यतिबेला १६ दिने महिला हिंसा विरुद्धको अभियान संचालन भईरहको छ । यो अभियानमा महिलाहरुको यो अधिकार त्यो अधिकार अनि महिला हिंसाको न्युनिकरण यसरी गर्ने त्यसरी गर्ने जस्ता कुराहरु भईरहेका छन् । तर यहानेर समानताको कुरा उठीरहेको बेल
विश्व एड्स दिवस र एचआईभीको कुरा(सम्पादकीय )
एचआईभी जाच गराऔ, आफनो अवस्था थाहा पाऔं भन्ने मुल नाराका साथ शनिवार ३१ औ विश्व एडस दिबस मनाईएको छ । हरेक बर्षको डिसेम्वर १ मा यो दिवस मनाईने गरिन्छ । यो दिवसको दिन खुव एचआईभी एडसको बारेमा चर्चा परिचर्चा गर्ने गरिन्छ । अझ यो दिवसमा �
धरानको सुँगुर साम्राज्य !
यो जन्मदै जगतमा कैंयौं प्रहार आए साम्राज्य दुइ हारे, हारेन शान हाम्रोरातो र चन्द्र सुर्य जंगी निशान हाम्रो .... कक्षा आठमा हुनुपर्छ । साम्राज्य भनेर यो कवितामा पढ्दा केही बुझीन । नेपाली सरले घोकाँउदा घोकाउदा गरे । धरान वडा नं ११ स
धरानको मेयरका लागि नेकपा भित्रै धेरै आकांक्षी, निर्वाचन अनिश्चित
स्थानीय तहमा रिक्त हुन आएका जन प्रतिनिधिहरुको पद पूर्तिका लागि सरकारले पुनः निर्वाचन गरी नगरलाई नेतृत्व दिने वा नदिने हो यो विषय अहिलेसम्म स्पष्ट हुन सकेको छैन ।संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको स्थापना पछि भएको राज्यको प�
प्रतिष्ठानको स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी भाडाको सिपाही बन्नुभएन(सम्पादकीय)
पुर्वकै ठुलो स्वास्थ्य संस्थाको ख्याती कमाएको बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरान दिनानुदिन धारासायी बन्दै गईरहेको छ । प्रतिष्ठानका पदाधिकारीहरुले प्रतिष्ठानको साख गिर्न नदिनको साटो झन झन गिराउदै गईरहेका छन् ।
के अव प्रतिष्ठानको अवस्था यस्तै रहन्छ ?(सम्पादकीय)
पूर्वको सबै भन्दा ठुलो अस्पताल भनिएको बीपी कोईराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानको अवस्था दिनानुदिन बिग्रदो अवस्थामा पुगेको छ । प्रतिष्ठान चरम बेतिथिको शिकार भएको छ । पुर्व मात्रै होईन भारतबाट समेत यहाँको उपचारको बारेम
प्रकाशित मितिः मंसिर 5, 2075
परिवार नियोजनको साधन र प्रयोगको अवस्था
नेपालमा उपलब्ध भएको परिवार नियोजनको साधन प्रयाप्त भएपनि यसको प्रयोगको अवस्था नाजुक रहेको छ । परिवारमा आफ्नो योजना बनाउने, परिवारलाई सुखी र खुसी बनाउने उदेश्यका साथ गरिने तयारी वा पूर्व योजनालाई परिवार नियोजन भन्ने गरिएको पाई
३ रूपैयाकाे लागतमा घरैमा चल्ला काेरल्ने मेसिन
के तपाईं न्युनतम लागतमा घरैको अन्डाबाट चल्ला निकाल्न चाहनु हुन्छ ? साधारण मान्छेले पनि चलाउन सक्ने...हास,कुखुरा,टर्की,बट्टाइ लगायतको भाले लागेको अण्डाबाट चल्ला निकाल्ने सजिलो सस्तो र भरपर्दो ह्याचिङ मेसिनको खोजिमा हुनुहुन्छ ?
बलात्कार र छोटा लुगाको सम्बन्ध
भरतपुरस्थित डबलीमा पूर्वप्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीको पुस्तक &lsquo;न्याय&rsquo;मा केन्द्रित भएर चलेको डेढ घण्टाको विमर्श टुंगिनै आँटेको थियो । बलात्कार र दण्डहीनताको प्रसंगमा कार्कीले भनिन्ः पीडितलाई न्याय दिलाउनु पर्छ । तर एउ�
डेंगु नियन्त्रणको प्रयास प्रभावकारी भएन(सम्पादकीय)
धरानमा पछिल्लो समय डेंगुका पाँच विरामी फेला परे । धरान जस्तो ठाँउमा डेंगु देखिनु अनौठो हो । धरानको हावापानीमा डेंगु फैलाउने लामखुट्टेको बृद्धि हुनु नै डेंगु संक्रमणको मुख्य कारण हो । सुरुमा डेंगुका विरामी भेटियो भन्ने जानकार
धरानका गुरु योजना सधै अलपत्र ?(सम्पादकीय)
धरानउपमहानगपालिकाले गुरु योजना बनाएर बनाउन लागेको अधिकांश भौतिक संरचना समयमै बन्न सकेका छैनन् । तत्कालीन मेयर ध्यानबहादुर राईले २३ बर्ष अगाडि धरान&ndash;१७ मा सप्तरंगी पार्क बनाउने योजना अगाडि सार्नुभयो, सोही अनुरुप त्यहा भौति�